Anisan'ny toerana misy mponina tena manara-dalana izany eny, saingy omaly atoandro dia gina tanteraka. Voaray ny hafatra raha ny teny aloha no jerena. Nangiana ohatr'ireny tanana nivoaham-paty ireny, tsy tahaka ny nahazatra hatramin'izay. Zava-dehibe izany, ary hita ho efa manaiky lamina ny olona rehefa tena henjanina ny raharaha. Ny tokony ho tonga ao an-tsain'ny rehetra, dia ny ainy no harovana. Mafy ny mitsahatra amin'ny asa aman-draharaha, saingy tsy maintsy misy safidy raisina hitandroana ny aim-bahoaka. Na izany aza dia tokony hisy vahaolana ara-tsosialy ho an'ny rehetra aroson'ny mpitondra, fa tsy ho ana ampahan'olona na ampaham-piarahamonina ihany.